Faarax Macalin muxuu ka yiri: "Qaxootiga Soomaalidu ha tagaan Dhadhaab" | KEYDMEDIA ONLINE
Faarax Macalin muxuu ka yiri: “Qaxootiga Soomaalidu ha tagaan Dhadhaab”
Nairobi (KON) – Gudoomiyaha Xiriirka Qaxootiga ee Dowlada Kenya Mr. Bady Acula ayaa yiri "Soomaalida Dalkeena ku nool waa in ay iska Xaadiriyaan xeryaha logu talo galay Qaxootiga sida Dhadhaab iyo Ifo".
Amarkan Dowlada Kenya ka soo fulay ayaa lagu sheegay in Dadka Soomaalidaa ee ku nool dalkaasi ay iska xaadiriyaan Xeryaha Qaxootiga loogu talo galay oo kala ah Dhadhaab iyo IFO waxaayna Xerada Dhadhaab ku taalaa 110km meel u jirta Xadka ay Kenya ay la wadaagto Soomaaliya.
Dadka Qaxootigaa oo aan Soomaalida aheyn ayaa ayagana lagu Amray in ay ku Xaroodaan Xerada Qaxootiga ee lagu magacaabo Kakuma oo 100KM ka jirta Magaalo Madaxda Nairobi dhanka Koofurta Dalka Sudan.
Shiikh Maxamuud Faarax (Jiis) ayaa Majlis Soomaali iskugu timid waxuu ka yiri:
"Aaway Rajii Kenya Gadaal ka rixayey oo lahaa Walaala nahay. Aaway Farax Macalin oo na lahaa Kenya la Dagaalanka Argagixisada ayeey Soomaliya ka Cawineysaa, ma waxaa loo socday in Dadka Soomaaiyeed oo dhibaatada Dalkooda ku habsatay kasoo qaxay la Xirxiro, la masaafuriyo kadibna la Bililiqeysto Hantidooda?"
Shiikh Maxamuud asagoo hadalkiisii sii wata ayuu yiri: "Waxaan Dawlada Cusub ee Soomaaliya ugu Baaqeynaa in ay ku dadaasho sidii lo badbaadin lahaa Dadka Soomaaliyeed oo ku dhaqan Dalka Kenya iyo Hantidooda."